Inta lagu jiro tababarkan Microsoft Excel 2019, waxaad baran doontaa sida loo abuuro xaashiyaha iyo qorista xogta, qaabeynta unugyada iyadoo loo eegayo noocyadooda iyo waxyaabaha ay ka kooban yihiin. Waxaad isticmaali doontaa qaan-garaynta Xafiiska 2019 ee horumarsan oo waxaad sameyn doontaa liisaska ku habboon. Waxaad sidoo kale isticmaali doontaa shaqeynta buuxinta deg degga ah ee Excel, waxaad gashaa astaamaha SVG iyo walxaha 3D shaxankaaga Excel 2019. Gaar ahaan, waxaad ku matali doontaa xogtaada tiradeeda qaababka dhammaan noocyada, sida aad u abuuri doonto una isticmaali doonto macros si loo fududeeyo farsamaynta isku-dhafan ama soo noq-noqoshada. Waxaad sidoo kale abuuri doontaa miisas isdabajoog ah iyo jaantusyo muhiim ah, qabashada iskuxirid waxaadna u adeegsan doontaa xalka, ka soo dhoofinta xogta banaanka keydka, ka dhig buugaagtaada shaqada inay helaan dadka araga naafada ka ah iyo kuwa kale.
Adeegsiga ugu horreeya ee xargaha ee Excel 2019 - Tutorial Video
Marka ugu horreysa ee lala xiriiro Excel - Tutorial Video
Sida loo soo saaro Excel - barashada fiidiyowga
Muuqaalka Backstage ee Excel 2019 - Tutorial Video
Jadwalka 'Excel Pivot' - Excel 2019 Tutorial
Qaab dhismeedka qaabaysan ee 'Excel' - qaabka loo yaqaan Excel 2019
Abuuritaanka buug-gacmeed cusub oo ku saleysan qaab-dhismeedka 'Excel 2019'
Sida loo dhoofiyo buug-gacmeedka qaabka PDF ama XPS ee Excel 2019
Sida loogu gudbiyo xogta Excel 2019 - Tutorial Video
Kala soocida xogta ee Excel 2019 - Tutorial Video
Sida loo beddelo xuduudaha daabacaadda ee Excel 2019
Tababarka Excel 2019: aasaasiga ah Diisambar 12, 2020Tranquillus
READ Febraayo 9, 2021 Kala guur wadareed: aalad cusub oo loogu talagay dhaqdhaqaaqa mihnadleyda Transco waa aalad siisa tababar shaqaalaha dib ugu tababbarka qaybaha horumarinta howlaha, markay ka shaqeeyaan qaybaha hoos u dhaca dhaqaalaha.
horeAdduunku waa is beddelayaa, adiguna adiga iyo annaguba!
socdaEreyga 2019 tababarka: aasaasiga
Tababarka iyo ka warqabka amniga dhijitaalka ah: caqabad istaraatiijiyadeed ee ANSSI
Ujeedo guul: noqo arday heer sare ah!